Stay safe and healthy while back at school | UNESCO Bangkok
This brief animated video reassures parents about their children returning to school as lockdowns end and how to prepare for the reopening of schools. Key messages are to continue to practice physical distancing and good hygiene and to keep informed about notices disseminated by education and health authorities.
ວິດີໂອ: ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບເມື່ອກັບເຂົ້າໂຮງຮຽນ
ວີດີໂອພາບເຄື່ອນໄຫວສັ້ນໆນີ້ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໝັ້ນໃຈ ກ່ຽວກັບການກັບຄືນເຂົ້າໂຮງຮຽນຂອງລູກພວກເຂົາ ເມື່ອມາດຕະການໃຫ້ຢູ່ເຮືອນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ແລະ ວິທີການກະກຽມ ສຳລັບການເປີດໂຮງຮຽນຄືນໃໝ່. ຂໍ້ຄວາມສຳຄັນນີ້ ແມ່ນເພື່ອສືບຕໍ່ປະຕິບັດການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມີສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນແຈ້ງການຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
วิดีโอสั้นเรื่องนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการกลับไปโรงเรียนของบุตรหลานหลังจากการกักตัวได้จบลง และเสนอแนะวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดโรงเรียนอีกครั้ง ประเด็นสำคัญได้แก่ การรักษาระยะห่างทางสังคมและความสะอาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการติดตามข่าวสารที่เผยแพร่โดยหน่วยงานด้านการศึกษา และสาธารณสุข
ဗွီဒီယို၊ ကျောင်းပြန် တက်ချိန်တွင် အန္ကရာယ် ကင်းကင်း နှင့် ကျန်းကျန်းမာမာ နေထိိုင်ပါ။
ဤကာတွန်းရုပ်ရှင် အတိုသည် သွားလာကန့်သတ်မှုများ ဖြေလျော့ပြီးနောက် ကလေးများ ကျောင်းပြန်တက်ချိန်တွင်မိဘများ၏ စိုးရိမ်သောကကို ပြေပျောက်စေရန်နှင့် ကျောင်းပြန်ဖွင့်ခြင်းအတွက် မည်သို့ ပြင်ဆင်ရမည်ကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။ အဓိက မှာကြားချက် အကြောင်းအရာများမှာ လူချင်း ထိတွေ့မှု မရှိဘဲ ခပ်ခွာခွာနေရန်၊ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှု အတွက် လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် နှင့် ပညာရေး နှင့် ကျန်းမာရေး အာဏာပိုင်များ ဖြန့်ဝေသော သတိပြုရမည့် အချက်များကို သိရှိရန် ဖြစ်သည်။